किन गर्मी मौसममा अत्याधिक मानिस बिरामी पर्छन् ? कसरी बच्ने ? – SidhaRekha
किन गर्मी मौसममा अत्याधिक मानिस बिरामी पर्छन् ? कसरी बच्ने ?
२०७५ जेष्ठ २८, सोमबार २०:०७ June 11, 2018
डा. प्रकाश तिमिल्सेना
हरेक वर्षझै यसपालि पनि गर्मी मौसमबाट बिरामी परेका सर्वसाधारणहरु अस्पतालमा आउन सुरु भइसकेको छ ।दिनप्रतिदिन बिरामीहरुको चाप बढ्दै गएको छ ।
हरेक स्वास्थ्य संस्थामा गएर हेर्ने हो भने त्यो देख्न पाइन्छ । यो क्रम अझै बढ्ने निश्चित छ । जति गर्मी बढ्यो उति बिरामीको चाप बढ्ने गरेको छ । केही हप्तामात्र पर्खिने हो भने अस्पतालका कोलियाहरुमा समेत बिरामीलाई राखेर उपचार गर्नुपने अबस्था आउछ । यो मौसममा ज्वरो, झाडापखलाको समस्या भईरहन्छ । त्यस्ता बिरामीहरु धेरै आउछन् । यस्ता बिरामीहरुलाई सामान्य उपचार पछि पनि घर पठाईन्छ ।
सामान्य स्वास्थ्यसंस्थामा गएर उपचार गर्न पनि सकिन्छ । तर यी बाहेक गर्मीयाममा सबैभन्दा धेरै हुने अन्य जटिल खालका रोग भनेको मलेरिया, कालाज्वार, टाईफाईड, जन्डिस आदि रोगहरु हुन ।
यो मौसममा हुने अधिकांस रोगहरु सरुवा हुने गर्छन, सामान्य सजगता नअपनाउने हो भने प्रकोपको रुप लिन्छ । ज्वरो, झाडापखालालाई समेत हामीले सामान्य भन्न मिल्दैन जबकी यही मौसममा हुने जन्डिस, मलेरिया, कालाज्वरत झनै खतरनाक हुन्छन् । समयमै उपचार पाउन नसकेका बिरामीको मृत्यु पनि हुन सक्छ । रोग भनेको आफै अचानक आउने होइन । हाम्रो वरीपरीको वातावरणले रोग निम्त्याउँछ । हाम्रो वातावरणले रोगको जन्म दिन्छ । सामान्य उदाहरण लामखुटेकै लिउ न, फोहोर व्यवस्थाप भएन, घरवरीपरी फोहार नै फोहोर भयो, खाल्डाखाल्डी भए त्यहां लामखुट्टेले घर बनाउँछ ।
लामखुट्टेले त्यसपछि अनेक रोगको जन्म दिन्छ । त्यसकारण हामीले सबैभन्दा पहिले हाम्रो घर वरपरको वातावरणले अत्यन्त सफा र सुग्घर बनाउनुपर्यो । गर्मीयाममा त झन् यो कुरा अत्याबश्यक छ । घर वरपरको वातावरण सफा राख्ने हो भने धेरै प्रकारका रोगहरु त्यसै हराउछन् ।
अन्य कुराहरुमा गर्मीयाममा घाममा अनाबश्यकरुपमा हिड्डुल गर्नु भएन । हिड्नै परे सजगता अपपाउनुप¥यो । बासी खानेकुराहरु खानु भएन । पानीको मात्र प्रशस्तरुपमा सेवन गर्नुप¥यो । केही समस्या परिहालेमा तत्काल स्वास्थय संस्थामा गरे आबश्यक सरसल्लाह लिनुपर्छ । हो, केही बर्षअघि नेपालगन्जमा झाडापखलाको प्रकोप फैलिएर धेरैको ज्यान गयो । यस्तै कुरा अन्य ठाउमा पनि हुन्छ । एकातिर तराई क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनका थुप्रै चुनौतीहरु छन् भने अर्कोतिर मौसमले पनि साथ दिँदैन।
खानेपानीका अवस्था कस्तो छ ? सबैलाई थाहै छ । मानव जिवनलाई स्वास्थ्य बनाई राख्न आवश्यक पर्ने कुराहरुकै बेमेल हुने गरेको ठाउमा बसेका हामीहरुलाई चुनौतीहरु त छन् तर फेरी त्यसलाई पार नगरी पनि सुःख छैन । चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । प्रशस्त मात्रामा स्वास्थ्य निकायहरु छन् उनीहरुकोमा गएर सल्लाह र सुझावहरु लिन सकिन्छ । एजेन्सीको सहयोगबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)
अघिल्लोपृथ्वीनारायण शाहको २१ फिट अग्लो शालिक निर्माणका लागि अभियान
पछिल्लोभारतमा वर्षाका कारण ७९ जनाको मृत्यु
चुनावी प्रतिबद्धता पूरागर्न सभासद् भण्डारी दौडधुपमा, बैतडीका ३३ हजार घरधुरीमा बिजुली र टेलिफोन पुग्ने
राम विनयलाई नेपाली वाङ्मय साधना सम्मान
निर्मलालाई न्याय माग्दै प्रम निवास अगाडि धर्ना
तल्लोस्वराडमा एकिकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन हुने
निर्मलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको आशंका, चारजना पक्राउ
निर्मलाका बुुवा यज्ञराज त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना
Patan-06, Baitadi, Nepal
[email protected]: [email protected],
View sidharekhanews’s profile on Facebook
View sidharekhanews’s profile on Twitter
View UCvDqmO_zJCjM9-zCaxoKtXw’s profile on YouTube
View 100254106740792276346’s profile on Google+
Ghanshyam Sagar Pant
Uttam Singh Bhandari
All Right Reserved. | Powered By: PINNACLE MEDIA